के स्तन पंप बिजुली वा म्यानुअल हो? - Ningbo Dearevery इलेक्ट्रनिक प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड एक
स्तनपानको मासु अधिकांश स्तनपानको मासुको लागि अनिवार्य उत्पादन हो। स्तन पंपले आमालाई स्तन दूध सेवन गर्न र आमालाई थप दूध चूसाउन मद्दत गर्न सक्दछ। यसबाहेक, केहि बच्चाहरु निपल स्तनपानको लागी आदी छैन, आमाको निन्द्रा चम्किने छैन, स्तन पंप स्तनपान दूधको सङ्कलन गर्न सक्दछ, बच्चाले सबैभन्दा अधिक पोषण स्तन दूध खाईदिनुहोस्।
1. मैनुअल स्तन पंप को सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो कि मूल्य अपेक्षाकृत किफायती छ। मलाई विश्वास छ कि धेरै आमाले यो थाहा पाउछन्; मैन्युअल सेतो पंप मात्र सुरक्षित छैन, तर आमाहरूले आफ्नै विशेषताहरूको अनुसार समायोजन गर्न सक्छन्। तर खराब स्थान अपरेसनको समस्या हो। आमाको आवेदनमा यो जटिल छ। लामो समयको मैन्युअल दुर्व्यवहारले पनि हातहरूलाई अझ घमण्ड गर्नेछ।
2. विद्युत् स्तन पंप अधिक बहुमुखी छ, र बलियो अवशोषण क्षमता र छिटो स्तन पम्पिङ गति छ। तथापि, स्वेटरमा सुन्दरताको कमी भनेको मूल्य अपेक्षाकृत महंगी हो;
3. स्तन पंप चयनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छनौट आमाको आफ्नै छनौटमा निर्भर गर्दछ। यदि स्तन पंप प्रयोगको फ्रिक्वेन्सी अपेक्षाकृत सानो छ, यो सिफारिस गरिएको छ कि आमाले मैनुअल स्तन पंप रोज्नु हुन्छ।यदि मातृहरूले स्तन पंपहरू धेरै पटक प्रायः प्रयोग गर्छन् र सीमित समय र प्रयास गर्दछन् भने यो इलेक्ट्रोनिक शल्य पंप छनौट गर्न सिफारिस गरिन्छ जुन सुलभ र सुविधाजनक दुवै छ।
सिलिकॉन फिडिंग चम्मच सामग्री